Qalabka Arooska: Xirmo Vector Lacag La'aan Ah Oo Gaar Ah | Abuurista khadka tooska ah
Casuumadaha, boodhadhka, albumyada ama xusuusinta xafladaha arooska, aad ayey muhiim u tahay in la helo qaybo ama waxyaabo garaaf ah oo u dhigma dhammaan howlaha ay tahay inaan daboolno. Gaar ahaan haddii aan daryeeleyno xubno kala duwan (tusaale ahaan naqshadeynta albumka iyo casuumaadaha), waxaa si weyn laguugula talinayaa inaan isku dayno shaqeyso aduunka sameynta xiriiro udhaxeeya soo-jeedimaha kala duwan iyo in si uun loo xuso inay qayb ka yihiin isla qoyska alaabooyinka, kuwaas oo dhammaantood muujinaya isla taariikhda, isla macaamiisha iyo isla dabaaldegga. Waxyaabaha ubaxyada sida looxyada ama madax-madaxeedyadu waxay u muuqdaan kuwo si wanaagsan loo soo dhoweeyey waxayna si qurux badan u bixiyaan qaab dhammaystiran, taas oo ah mid aad u xiiso badan maxaa yeelay waxay na siisaa natiijooyin caadi ah, natiijooyin yar-yar isla waqti isku mid ah, oo had iyo jeerna ku raaxeysta meel bannaan oo ballaadhan oo hal-abuurnimadeena ah. neefsan kara oo sameyn kara saameyn muuqaal oo wax ku ool ah. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo a xulashada walxaha jihaysan hawlaha noocan ah.
Laga soo xigtay shabakadda Freepik Waxaan helnay xirmo toddobo kooxod oo ah kuwa ugu xiisaha badan uguna faa'iidada badan mashruucan noocan ah. Waxaad ka heli kartaa qaybaha walxaha gebi ahaanba bilaashka ah serverka 4shared (si gaar ah uga sii cinwaankaan). Waxaan rajeynayaa inaad ku raaxeysaneyso dabcan haddii aad dhibaato ku qabto inaad soo dejiso waxyaabaha ku jira ama nooc kasta oo shaki ah… noo daa faallo
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » Qalabka Arooska: Xirmo Vector Lacag La'aan ah
Aad baad u mahadsantahay! ;)
Waad soo dhawaynaysaa Roy! :)
Xirmooyinka Kheyraadka oo lagu qiimeeyay $ 15.000 ... kaliya $ 79!
Crystal galaas ayaa si muuqata u sawiray Kaylee